Malagasy ariary Ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana tantara (2021)
Malagasy ariary Ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana tantara tantara satria 1998 mandra- 2022. Vola fiovam-po tabilao Malagasy ariary Ny Euro (2021).
Ny tantaran'ny Malagasy ariary dia voatahiry ao amin'ilay tranokala isaky ny taona 1992. Ny tantaran'ny Malagasy ariary to Euro ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny taona. Malagasy ariary ho an'ny daty na oviana na oviana. Ireo andinin-teny rehetra amin'ny Malagasy ariary mankany Euro nanomboka ny taona 1992 ka ny 2022 dia eto. Ny tantaran'ny Malagasy ariary to Euro ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny 1992 ka 2022 isaky ny taona.
Eo amin'ny tabilaon'ny tantaran'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary mankany Euro, afaka hitanao ny tantara lava momba ny fanovana ny sandan'ny sandam-bola. Ny tabilao ny tantaran'ny Malagasy ariary to Euro dia mampiseho ny teny rehetra tao anatin'ny 30 taona lasa. Ny tabilaon'ny tantaran'ny Malagasy ariary to Euro nanomboka tamin'ny 1992 izay nasiana teny isaky ny taona. Raha te hahalala ny tahan'ny marina tamin'ny taon-dasa, dia miorena amin'ny tabilao ny tantaran'ny Malagasy ariary mankany Euro. Ny tabilao tantara momba ny fifanakalozana dia manana fiantsoana ifanakalozana. Hivezivezy eo amin'ny tabilao.
Niova fo Malagasy ariary Ny Euro Malagasy ariary Ny Euro Taham-panakalozana Malagasy ariary Ny Euro velona amin'ny fifanakalozana Forex tsena
Desambra 2021 0.000219
Novambra 2021 0.000215
Oktobra 2021 0.000218
Septambra 2021 0.000216
Aogositra 2021 0.000221
Jolay 2021 0.000220
Jona 2021 0.000219
Mey 2021 0.000220
Aprily 2021 0.000224
March 2021 0.000220
Febroary 2021 0.000217
Janoary 2021 0.000207
Azonao jerena ny lisitry ny tantaran'ny Malagasy ariary nanomboka tamin'ny 1992 tao amin'ny tranokala. Nisy tabilao an-tserasera iray momba ny tantaran'ny Malagasy ariary / Euro vola isan-taona hatramin'ny taona 1992 no namoronana ity pejy ity. Tantaran'ny fifanakalozana amin'ny latabatra: Malagasy ariary to Euro Azo atao isan-taona: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Fanamarihana isam-bolana ao amin'ny Malagasy ariary mankany Euro, azonao jerena raha tsindrio ny rohy amin'ny taona eo amin'ny latabatra tantara ho an'ny taona. Azonao jerena ny Malagasy ariary to Euro ny tahan'ny fifanakalozana isaky ny taona sy isam-bolana. Kitiho ny rohy amin'ny taona.
Ny fiovana amin'ny fifanakalozana fifanakalozana mandritra ny fotoana maharitra dia hita mazava ao amin'ny pejinay momba ny tantaran'ny fifanakalozana. Tombanana hoatran'ny niova ny vola nateraky ny 10, 20 na 30 taona. Jereo ny tabilaon'ny teny nindramina nandritra ny fotoana maharitra. Ny fiakaran'ny sy ny fianjanan'ny Malagasy ariary mankany Euro nanomboka tamin'ny 1992. Ao amin'ny tranokalanay dia misy ny tantaran'ny taham-bola rehetra eo amin'ny rehetra.
Ao amin'ny tranokalanay dia afaka mahita ny tantaran'ny sandam-bola amin'ny olon-kafa ianao nandritra ny taona maro lasa izay. Tantaran\_'ny maimaimpoana momba ny vola rehetra tao anatin\_'ny 30 taona lasa izay tao amin\_'ity fizarana tranokala moneyratestoday.com ity Tahiry maimaimpoana maimaim-poana amin'ny Malagasy ariary to Euro ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny 1992 ka 2022 an-tserasera izao. Azo jerena maimaimpoana ny tantaran'ny Malagasy ariary ho an'ny taona voafidy raha tsindrio ny rohy amin'ny taona eo amin'ny latabatra tantara momba ny loha-hevitra.
Mobile dika Contacts Cookies Mpandrindra vola © 2022